Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Sanadlaha ahaa ee Arimaha Geeska Africa oo Shalay Magaalada Lund ee Wadanka Sweden Lagu soogabagabeeyay
Shirkii Sanadlaha ahaa ee Arimaha Geeska Africa oo Shalay Magaalada Lund ee Wadanka Sweden Lagu soogabagabeeyay
Shir sanadle ah oo laguqabto magaalada Lund ee wadanka Sweden ayaa,shalay lagu soo gaba gabeeyay magaalada Lund. shirkan ayaa, lagaga hadlayay arimaha Geeska Afrika, ee murugsan gaar ahaan Khayraadka Dabiiciga ah. Shirkan ayaa sanad walba lagaga hadlaa xaalada geeska Afrika sida Dhaqaalaha, Siyaasada, Colaadaha iyo Arimaha Bulshada.
Mawduuca sanadkan laga hadlayay ayaa waxa uu ahaa cinwaankiisa – Shirkii 12aad ee Geeska Afrika, Khayraadka, Colaada, iyo Nabadgaliyo joogto ah ooy helaan dalalka Geeska Afrika (12th Horn of Afrika, Resources, Conflict, and Peace in Horn of Africa region.)
Ergooyin ka kala yimid dalalka Somalia, Ethiopia, Eritrea, Sudan, Djibouti, South Sudan iyo Shaqsiyaad kasocday Ururro shirka lagu casuumay ayaa shirkan kaqeybgalay. Waxaa kaloo shirkan kasoo qaybgalay dad badan oo Diblamaasiyiin, siyaasiyiin iyo aqoonyahano isugujira oo madax banaan kuwaasoo dhamaantood daneeya xaalada Geeska Africa.
Qadiyada Ogadenya markii laga hadlayay, waxaa la gaadhsiiyay shirka fariin qoraal ah oo ka socotay Jaaliyadaha Soomaalida Ogadenya ee Yurub, waxaana waftigii ka socday jaaliyadaha uu usheegay shirka inay Qadiyada Ogadenya tahay Xudunta dhibaatada Geeska Afrika, iyadoon xal waara laga gaadhina ay adagtahay in xal waara loohelo dhibaatooyinka iyo Xurgufaha Siyaasadeed iyo Ciidan ee kataagan Geeska Afrika. Xubnaha kasodcsay jaaliyadaha Ogadeniya ayaa waxay aad oogu sharxeen shirka xaaladihii uu soo maray halganka shacabka Ogadenya laga soo bilaabo 1948 ilaa maanta.
Doodahan oo dhammaantood aad u xiiso badnaa ayay kaqeyb galayaasha isku weydaarsadeen doodo ku tacaluqay dhibaatooyinka Geeska Africa gaar ahaan xubnihii kasocday Ogadeniya ayaa waxay qabsadeen masraxyadii doodaha taasoo aad looga hadlay dhibaataduu gumaysigu kuhayo shacabka Somalida Ogadeniya.
Waftgii shirkan uga qaybgalay Somalida Ogadeniya ayaa waxay kaqaybiyeen halkaas warqado aad muhiim u ah oo xogag badan oo dhinacyo badan taabanaya qof walba oo shirkaas kasoo qaybgalay lasiiyay si ay ula socdaan arimaha ka socda Ogadeniya,
Waxa kale oo waftigii Ogadeniya kasocday ay wada hadalo si gooni gooni ah ula yeesheen dhamaan masuulyintii iyo aqoonyahanadii shirkaas ka soo qayb galay.